Odisha Tours iyo Socdaal | Qiimaha Gawaarida Lacageed iyo Tababaraha Tababaraha
Ijaarteena baabuurta raaxada leh iyo tababarayaasha
Waxaan bixinnaa baabuurta raaxada leh iyo tababarayaasha kiraysta si kor loogu qaado waayo-aragnimadaada iyo inaad awood u yeelatid inaad ka faa'iideysato waqtiyadaada. Mudnaanta ugu sarraysa waa noo qancin.
Qaado fursada aad ku aragto qaar ka mid ah indha-indheynta Hindiya Bhubaneswar iyo hareeraheeda intaad booqanayso Odisha.
1 Dzire ama la mid ah 850 1500 140 14
2 Canbaarta ama wax la mid ah 1000 1800 160 16
3 BRV ama wax la mid ah 1200 2200 200 20
5 Magaalada Honda 1600 2600 260 25
8 Audi-A3 ama BMW-X1 5000 10000 900 90
Maalinta Darawalka BATA: 200 ee Sl # 1 ilaa 6, iyo 300 loogu talagalay 7 ilaa 9
Lacagta habeenkii (22: 00 ilaa 06: 00 Hrs): Rs. 200 ee Sl # 1 ilaa 6, iyo Rs. 300 loogu talagalay 7 ilaa 9
Hoos Hoose Ka-baxsi: Rs. 300 ee Sl # 1 ilaa 6 iyo Rs. 400 loogu talagalay 7 ilaa 9
Kiiloomitir & saacado waxay bilaabi doonaan & dhameyn doonaan meesha ijaarashada (Garage si Garage)
Ka dib markii 4 Hrs / 40 Kms slab ah, bixinta daqiiqadaha 30 ayaa la oggol yahay. Wixii dheerad ah ee ka baxsan liidhada, 8 Hrs / 80 Kms slab waa la isticmaalayaa. Marka la dhameeyo 8 Hrs / 80 Kms slab, KM / Saacad dheeraad ah ayaa lagu soo dallacayaa iyadoo loo eegayo Gaadiidka Gaadiidka.
Canshuuraha Canshuurta, Canshuurta Isku-dhafka ah iyo Gawaarida ayaa lagu dallacayaa inta udhaxeysa + GST: 5%.
Wixii ka baxsan waajibaadka saaran, masaafada ugu yar waa in la xisaabiyaa 250KM taariikhda taariikhda taariikhda ama masaafada dhabta ah, hadba kan ka sareeya. Kharashyada waa inay ku saleysan yihiin KM sida ku cad qiimaha.
Joogitaanka A / C waxaa laga qaadayaa saldhigga Pro-rata.
Qiimaha kor ku xusan waa la cusbooneysiin doonaa haddii kor u kaca qiimaha shidaalka & dhismaha canshuurta.
Tababaraha LUQA A / C
sidoo kale waa la heli karaa.
wixii faahfaahin iyo macluumaad dheeraad ah
ADEEGYADA LOOGU TALAGALAY:
Digniinta SMS-ga ee ku saabsan xaqiijinta ballanta.
Dhiirranaanta SMS / Waraaqaha digniinta ah ee ku saabsan baabuurka iyo baabuurka kahor intaan 02 saacadaha Pick-up.
Warqadda Daily News, Dhalinta Dharka, Dallalka, Qalabka Caawinta Caawinta, Bustaha iyo warqadaha Nadiifka ah ee lagu bixiyo dhamaan baabuurta oo ku salaysan fican.
Gawaarida oo dhan waa hawo-qaboojiye, sigaar-cabbid, nadiif iyo nadiif.
Wixii cusbooneysiin ah, Cunto fudud, Miro & Casiir ayaa loo diyaarin doonaa ergooyinka iyadoo la codsanayo kharash dheeraad ah.
Shauffeurs iyo / ama Wakiilka Garoonka Sandakbo ee Wakiilka oo ku yaala Goobta Soo-dhaweynta ee Garoonka / Tareenka Saldhiga si ay u helaan marti-qaadayaashooda iyo Pick-up.
Sandbalka Silbisyada Tours waxay bixiyeen khibrad khibrad leh, u hoggaansamaan, xirfadle ah oo ay la socdaan wadooyinka iyo dharka shirkadda.
Xirfadlayaasha Waxtarka leh waxay ku faahfaahsan yihiin goobta si ay ula socdaan shuruudaha Macaamiisha ee dhacdooyinka iyo shirarka.
Wareegida adeegga cabsida saacadaha waxaa laga heli karaa shirkadaha shirkadaha iyo safarka, safarada goobaha lagu tago, safar la hagayo iyo dhacdooyin gaar ah.
Adeegyada qandaraaska ee gaarka ah ayaa loo heli karaa aroosyada.
Faahfaahinta martida ayaa lagu kaydiyaa macluumaadka saldhigga si ay u siiyaan adeegyo hagaagsan amarrada xiga.
Diyaargarowga baabuurka waa in la sameeyaa ka hor saacadaha 24. Si kastaba ha noqotee, Qodobka Hawlaha Sandbirdaha Qallalka ah ayaa la soo xidhiidhi karaa haddii gaariga looga baahan yahay saacadaha 24.
Marka la samaynayo barta internetka, dhammaan macluumaadka foomka loo baahan yahay waa in la dhigaa.
Ogeysiis Khadka-tooska ah ayaa si dhaqsi ah u raacaya lacag-bixin degdeg ah. Si kastaba ha ahaatee, khatarta ku haboon. Canshuuraha, Khidmadda Lacagta, Khidadaha Baabuurta Baarka ah iyo Kharashka Bixinta Xuduudaha ee Dawlada Dhexe waa in ay bixiyaan isticmaalaha wakhtiga qashin qaadista.
Dhamaan xarumaha iyo macaamilada laga helo sanduuqa Pebbles ee ku yaala bogga waxaa lagu xirayaa Sandbib Pebbles. Sanduuqa Qumaanka ee Sand waxay leeyihiin sharraxaad ah inay ka qoomameynayaan ballan-qaadka la xaqiijiyay iyadoo loo eegayo ciriiriga ka baxsan koontaroolkooda.
Lacagta Lacageed ee 15% ee qiyaasta qiyaasta biilasha waa in lagu soo dallacaa haddii saacada la joojiyo saacadaha 06 ka hor. Marka baabuurku ka baxo Garage, qadarka buuxa ee qiyaasta waxaa bixinaya martida.
Ka dib markii aad ku qortey On-Line, waxaad ka hubin kartaa xaaladaada xarunta adeega 24Hrs.